Super Hero Fighting Incredible Crime Battle 1.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Super Hero Fighting Incredible Crime Battle
Super Hero Fighting Incredible Crime Battle ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Crime rate is growing in the city and the situation is totally off the control for the Metropolitan Police. This time your city will becomeawar-head zone. Don’t let the underworld killers rule the streets. Beingasuper hero, its your turn to show all your epic power and marvelous strategy to protect the people and whole world. Use incredible fighting skills and precise shooting proficiency to eliminate crime battle. And become the most courageous and fearless war hero.
To rescue the injured citizens from the city crime battle and fight with gangsters is not an easy duty. Answer the call of the injured & rescue them! They call to you because they believe in your mutant super hero strange powers & they know you will do anything to perform your duty. They look up to you as their super hero. Only you can help the military army save your country & city so help them whole heatedly to win this crime battle against the enemy terrorist forces, crime gangster & with the help of your super hero mutant strange super power rescue every injured from the frontline.
Life of an amazing super hero flying from one building to another, rescue civilians and fighting with crime and winning the city battle ,isatrue hero thriller. The flying super simulator gives youacomplete action experience of city battle unseen in some strange hero games. Transform into super flying legend and Show the villains and mafia who'sasuperhero.
Super hero is all about survival. Makingasafe rescue of citizens from the criminals, villains & gangsters squad in mission.To rescue the injured citizen from the war zone super hero need to show some mutant power and maneuvering strategy. Beginadesperate survival mission to stand among the living in this bold adventure survival game. Save the humans on earth in the art of rescue. Fly around in grand city with super hero vigilant power and rescue the kids and girls fromaburning sky scrapper, natural calamities and badly hit by car, truck or buss in futuristic rescue game.
Super Hero Fighting FEATURES :
* Incredible Hero abilities: sticking wall to wall, flying, throwing web.
Download Now Super Hero Fighting Incredible Crime Battle and have fun.
ရဲ့ရာသီ၏အများဆုံးရတာဟာနှင့် Electrify ဂိမ်းကစားကြစို့။ စူပါသူရဲကောင်းအကြမ်းဖက်, လူဆိုးဂိုဏ်းများနှင့်အရိပ်မာဖီးယားဂိုဏ်းဓားပြဆန့်ကျင်အန္တရာယ်နှင့်သေစေနိုင်သောရှာပုံတော်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ကြ။ ယင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုနှင့်ပျော်စရာထုပ်ပိုးဂိမ်း။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုအသစ်နှင့်အံ့သြဂိမ်းကစားရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ဒါဟာသင်တို့အဘို့အခွင့်နေရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်စစ်သူရဲကောင်းဖြစ်လာမယ့်အချိန်ပါပဲ။ သင်သည်သင်၏အဆုံးစွန်ပြိုင်ဘက်မာဖီးယားဂိုဏ်းအေးဂျင့်ဆန့်ကျင် sneaky လှည့်ကွက်နှင့်သင်၏အံ့အားသင့်တိုက်ခိုက်မှုပြသနိုင်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်စူပါဟီးရိုးဖြစ်ဖို့အချိန်ပါပဲ။
ရာဇဝတ်မှုနှုန်းကိုမွို့၌ကြီးထွားလာသည်နှင့်အခြေအနေကလုံးဝမြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့များအတွက်ထိန်းချုပ်မှုကိုချွတ်သည်။ ဤအချိန်ကသင်၏မြို့စစ်-ခေါင်းကိုဇုန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မရဏာနိုင်ငံလူသတ်သမားများလမ်းများမအုပ်စိုးရစေမထားပါနဲ့။ တစ်စူပါသူရဲကောင်းအပေါင်းတို့, သင့်ရဲ့မော်ကွန်းပါဝါနှင့်လူများနှင့်လောကဓာတ်လုံးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အံ့ဘွယ်သောမဟာဗျူဟာကိုပြသရန်၎င်း၏သင့်ရဲ့အလှည့်ဖြစ်ခြင်း။ ရာဇဝတ်မှုစစ်တိုက်ပပျောက်ဖို့မယုံနိုင်စရာတိုက်ပွဲများကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တိကျသောပစ်ခတ်မှုစာကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။ ထိုအခါအများဆုံးရဲရင့်ခြင်းနှင့်အကြောက်ကင်းစစ်သူရဲကောင်းဖြစ်လာသည်။
မြို့သူမြို့သားရာဇဝတ်မှုစစ်တိုက်ကနေဒဏ်ရာရနိုင်ငံသားများကယ်တင်ရန်နှင့်ဂိုဏ်းနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းငှါလွယ်ကူသောတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒဏ်ရာရသူများ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုအဖြေ & သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်! သူတို့သည်သင်၏ Mutant စူပါသူရဲကောင်းကိုယုံသောကြောင့်, သူတို့ကထူးဆန်းအင်အားကြီးသင်တို့ဆီသို့မခေါ် & သူတို့သင်သည်သင်၏တာဝန်ဖျော်ဖြေဖို့ဘာမှမပြုကြလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့စူပါသူရဲကောင်းအဖြစ်သငျသညျအထိကြည့်ရှုပါ။ သာသင်ကရှေ့တန်းကနေဦးဒဏ်ရာရတိုင်း, ဒါကြောင့်ရန်သူအကြမ်းဖက်သမားအင်အားစုတွေဆန့်ကျင်ကဒီရာဇဝတ်မှုစစ်တိုက်အနိုင်ရ heatedly သူတို့ကိုမြေတပြင်လုံးကိုကူညီစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်သင့်ရဲ့တိုင်းပြည် & မြို့ကယ်တင်ကူညီဖို့ရာဇဝတ်မှုလူဆိုးဂိုဏ်း & သင့်ရဲ့စူပါဟီးရိုး Mutant ထူးဆန်းတဲ့စူပါပါဝါကိုကယ်ဆယ်ရေးများ၏အကူအညီဖြင့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုအံ့သြဖွယ်စူပါတယောက်ကိုတယောက်အဆောက်အဦကနေပျံသန်းသူရဲကောင်း, ကယ်ဆယ်ရေးအရပ်သားများနှင့်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေနှင့်မြို့သည်စစ်တိုက်အနိုင်ရတဲ့၏အသက်, စစ်မှန်သောသူရဲကောင်းသည်းထိတ်ရင်ဖိုပါပဲ။ အဆိုပါပျံသန်းစူပါ Simulator ကိုသငျသညျအခြို့သောထူးဆန်းသူရဲကောင်းဂိမ်းထဲမှာမမြင်ရတဲ့မြို့သည်စစ်တိုက်မယ့်ပြီးပြည့်စုံသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွေ့အကြုံကပေးသည်။ စူပါပျံသန်းဒဏ္ဍာရီသို့ Transform နှင့်စူပါဟီးရိုးရဲ့သူလူကြမ်းအဖြစ်နှင့်မာဖီးယားဂိုဏ်းပြပါ။
စူပါသူရဲကောင်းအားလုံးရှင်သန်မှုအကြောင်းပါ။ အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူအနေဖြင့်နိုင်ငံသားများ၏လုံခြုံကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်ခြင်း, mission.To များတွင်လူကြမ်းအဖြစ် & ဂိုဏ်းကစားသမားစစ်ပွဲဇုန်စူပါဟီးရိုးအနေဖြင့်ဒဏ်ရာရနိုင်ငံသားကယ်တင်ရန်အချို့ Mutant အာဏာနှင့် maneuvering မဟာဗျူဟာကိုပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီရဲရင့်စွန့်စားမှုရှင်သန်မှုဂိမ်းထဲမှာလူနေမှုကြားတွင်ရပ်တစ်ခုအပူတပြင်းရှင်သန်မှုမစ်ရှင်စတင်ဖို့။ ကယ်ဆယ်ရေး၏အနုပညာအတွက်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောလူသားသိမ်းဆည်းပါ။ စူပါသူရဲကောင်းနိုးနိုးကြားကြားပါဝါနှင့်အတူခမ်းနားမွို့၌လှည့်ပတ်ပျံသန်းပြီးမီးလောင်သောကောင်းကင်ပြာ scrapper, သဘာဝဘေးနှင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားအနာဂတ်ကယ်ဆယ်ရေးဂိမ်းထဲမှာကားထရပ်ကားသို့မဟုတ် buss ဝင်တိုက်ခြင်းမှကလေးတွေနှင့်မိန်းကလေးများကယ်နှုတ်။
* Incredible သူရဲကောင်းစွမ်းရည်: ဝဘ်ပစ် ချ. ပျံ, မြို့ရိုးမြို့ရိုးကိုကပ်။
* Fantastic ရတာဟာဂိမ်းကစား!
အတူစစ်တိုက်ခြင်းငှါ * အကွိမျမြားစှာမစ်ရှင်နှင့်လူဆိုးဂိုဏ်း
* Amazing 3D ပတ်ဝန်းကျင်
Incredible ရာဇဝတ်မှုတိုက်ပွဲ Fighting အခုတော့စူပါသူရဲကောင်း Download နှင့်ပျော်စရာရှိသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. !!!
Super Hero Fighting Incredible Crime Battle အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Super Hero Fighting Incredible Crime Battle အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Super Hero Fighting Incredible Crime Battle အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
carlosgarrido89 စတိုး 12.26k 2M
Super Hero Fighting Incredible Crime Battle ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Super Hero Fighting Incredible Crime Battle အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Action Action Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://goo.gl/dWrtMJ
App Name: Super Hero Fighting Incredible Crime Battle
လက်မှတ် SHA1: 13:50:8C:D7:BC:B4:1E:3D:FE:70:29:2C:0D:69:68:CE:B7:20:94:64
အဖွဲ့အစည်း (O): Shoto Studios
Super Hero Fighting Incredible Crime Battle APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ